विपन्न – Himalaya Television
८ माघ २०७८ दमौली । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाले सुत्केरी र ७५ वर्षमाथिका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले खरिद गरी ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा विपन्न सुत्केरी, ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक र दुर्घटनामा परेका...
प्रदेश २ सरकारले गरिब र विपन्नका लागि आवास बनाइदिने
३० पुस २०७८ जनकपुर । प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ । महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा...
विपन्न समुदायका महिलालाई सिलाई–कटाई तथा प्राविधिक तालिम (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ पुस २०७८ काठमाडौं । हेस्रा नेपाल र हेल्पिङ ह्याण्स, काठमाडौंको सहकार्यमा २० जना महिला तथा पुरुषले विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएका छन् । हेस्रा नेपालले पिछडिएका तथा विपन्न समुदायका महिलाहरुलाई सिलाई–कटाई तथा प्राविधिक तालिम प्रदान गरेको हो । विभिन्न...
प्रधानमन्त्रीद्वारा विपन्नका लागि निर्मित भवन हस्तान्तरण
१८ फागुन २०७७ झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न परिवारका लागि झापामा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण गर्नु भएको छ । बिर्तामोड नगरपालिका, ह्याविट्याट नेपाल र सहारा नेपालको साझेदारीमा निर्माण गरिएका ३७ वटा आवाससहित नमूना बस्ती प्रधानमन्त्री ओलीले...
हाम्रो टीम नेपालले बाँड्यो सडकमा बस्न बाध्य विपन्नलाई ब्लाङ्केट
११ पुस २०७७ काठमाडौं । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई भोकै परेकाहरुलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टीम नेपालले सडक पेटीमा बस्न बाध्य मानिसलाई ब्लाङ्केट वितरण गरेको छ । थापाथलीस्थित प्रसूति गृह पछाडि खाना खान आएकालाई हाम्रो टीमले न्यानो ब्लाङ्केट वितरण...
१९ कात्तिक, २०७७, दाङ । दाङमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ६७ वटा घर निर्माण भइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख तथा दलित समुदायका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा छनोट भएका २ सय ६७ घर...
विपन्न नागरिकले कहाँ कसरी पाउँछन् निशुल्क उपचार ? यस्तो छ व्यवस्था (भिडियोसहित)
९ असोज, २०७७ काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । तर पनि पैसा अभावकै कारण आम नागरिक उपचार पाउनबाट बञ्चित छन् । पैसाकै कारण उपचारबाट नागरिक बन्चित नहोउन् भनेर सरकारले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी...
खुलामञ्चमा विपन्नलाई खाना, किन भयो झडप ? (भिडियोसहित)
१५ भदौ, २०७७, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सबैभन्दा मारमा दैनिक ज्याला गरेर हातमुख जोड्नु पर्ने वर्ग परेका छन् । समस्यामा परेकालाई विभिन्न परोपकारी समूहले सहयोग पनि गरिरहेका छन । काठमाडौंको खुलामञ्चस्थित बसपार्कमा द हण्ड्रेड...